ဒီလူ့နှယ် .. စွံလိုက်ပုံများကတော့ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Gossip, Rumor » ဒီလူ့နှယ် .. စွံလိုက်ပုံများကတော့ …
Posted by weiwei on Mar 11, 2012 in Gossip, Rumor, Society & Lifestyle | 45 comments
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အတင်းပြောချင်စိတ်ပေါက်လာလို့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို စာချရေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မမိဘတွေနေတဲ့ရပ်ကွက်ထဲမှာပေါ့ … အိမ်တွေက လုံးချင်းအိမ်တွေဖြစ်ပြီး ခြံစည်းရိုးတွေခပ်မြင့်မြင့်နဲ့ ဖာသိဖာသာနေတတ်ကြတယ်။ တစ်အိမ်နဲ့တစ်အိမ် မမြင်ရပေမယ့် ကျွန်မတို့အိမ်ဘေးအိမ်က ကားဂိုဒေါင်အပေါ်ထပ်က ဒရိုင်ဘာနေတဲ့အိမ်ခန်းကိုတော့ ကြည့်ရင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ ခါတိုင်းတော့ လူနေလိုက် မနေလိုက်နဲ့ အမြဲလိုလိုပိတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ – ၄ လလောက်ကစပြီး မိသားစုတစ်ခုပြောင်းလာပြီးနေထိုင်ကြတယ်။ အသက် ၅၀ လောက်ခန့်မှန်းရတဲ့ ဒရိုင်ဘာလူကြီးရယ်၊ အသက် ၅၀ လောက်ရှိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရယ်၊ ကလေး ၄ ယောက်ရယ်၊ အသက် ၂၀ ကျော်လောက် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရယ်ဆိုတော့ လူကများပြီး အခန်းကခပ်ကျဉ်းကျဉ်းပါပဲ။
ကျွန်မတို့လဲ လူအသစ်တွေပြောင်းနေတာဆိုတော့ နဲနဲစပ်စုကြည့်မိတာပေါ့ .. ကျွန်မ အမေက လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့ ကလေး ၄ ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး အသက် ၅၀ လောက် နှစ်ယောက်လို့ လင်မယားလို့ သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မ ညီမက မဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ … အသက် ၂၀ ကျော်လောက်နဲ့ အဘိုးကြီးနဲ့က လင်မယားဖြစ်မယ်တဲ့။ ကျွန်မကတော့ အမြဲနေနေတာမဟုတ်တော့ မမှန်းတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေ ဘယ်လိုများပတ်သက်ပါလိမ့်လို့တော့ သိချင်နေခဲ့တာပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ အော်ကျယ်အော်ကျယ်နဲ့ ရန်ဖြစ်သံ သဲ့သဲ့လဲ ကြားရလေ့ရှိတယ်လေ ..
ဒီအပတ်တော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ လမ်းထိပ်က ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာ ခေါင်းသွားလျှော်ရင်းနဲ့ အကြောင်းစုံသိခဲ့ရတယ်။ ဘေးအိမ်က အိမ်ရှင်အဒေါ်ကြီးလဲ ဆံပင်လာဆိုးလို့ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်က အဲဒီအကြောင်းကို သိချင်လွန်းနေတဲ့ ကောင်မလေးက မေးလိုက်တယ်လေ …
အသက်ကြီးကြီး ၂ ယောက်က လင်မယားပါတဲ့ .. ကလေးကြီးကြီး ၂ ယောက်က သူတို့ကလေးတဲ့ … မိန်းမလုပ်သူက သူ့တူမငယ်ငယ်လေးကို အိမ်ပေါ်ခဏခေါ်ထားရင်း သူ့ယောက်ျားက ယူလိုက်တယ်တဲ့ … ကလေး ၂ ယောက်ထပ်မွေးတယ်။ ယောက်ျားလုပ်သူက အဒေါ်ရော တူမကိုရော တစ်ပြိုင်နက် ပေါင်းသင်းနေထိုင်တယ်။ အဲဒါထက်ပိုဆိုးတာက အဲဒီယောက်ျားက အပြင်မှာလဲ တော်တော်ရှုပ်တယ်တဲ့။ နောက်ထပ် ၂ ယောက်ရှိသေးတယ်တဲ့။ အသစ်တစ်ယောက်ရှုပ်တိုင်း တူမလုပ်တဲ့မိန်းမကပြသနာရှာပြီး မပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီး ရန်ဖြစ်ပြီး ရွာပြန်တယ်တဲ့။ ယောက်ျားလုပ်တဲ့လူက ကောင်မလေးအဒေါ်ဖြစ်တဲ့ သူ့မိန်းမကြီးကို ခြိမ်းခြောက်တယ် … နင့်တူမကို ရအောင်ပြန်ခေါ်လာရမယ် .. ခေါ်လာလို့မရရင် နင့်ကိုပါ မပေါင်းနိုင်ဘူးလို့ ပြောသတဲ့ … အဒေါ်လုပ်သူက သူ့ကိုမပေါင်းမှာစိုးလို့ သူ့တူမကိုတောင်းပန်ပြီး ပြန်ခေါ်လာရပြီး ကလေးတွေကိုပါ ထိန်းပေးရသတဲ့လေ …
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ပါ …
ရှိတော့ရှိတယ် ရှားမယ်ထင်တယ်နော် ….
တော်တော်ရှားပေမယ့် ရှိတော့ရှိတတ်တဲ့ ဇတ်လမ်းမျိုးပါ မဝေေ၀ရေ-
အဲသလို မယားပြိုင်အတူပေါင်းတာမျိုးမှာ ဇတ်လိုက်ယောက်ျားက တော်တော်လည်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
လည်တာအပြင် အဲသည်မိန်းမတွေကို တကယ်တော့ သိပ်မချစ်တဲ့၊ ကွာဘို့လိုရင် ကွာဘို့အသင့်ရှိတဲ့လူမျိုး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ကျုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးများမှာက အိမ်ထောင်အပျက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာက ရှိနေတယ်။
အဲဒီအချက်ဟာ ယောက်ျားတွေအတွက် အသုံးချစရာဖြစ်နေတာပေါ့…..
”ကျုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးများမှာက အိမ်ထောင်အပျက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာက ရှိနေတယ်။”
ဦးဦးပါလေယာ ပြောတာ ရှိတော့ရှိမယ် ဒါပေမဲ့ ရှားသွားပြီ .. ကိုယ်စွမ်းကိုစ ရှိတဲ့သူဆို ဒီလိုမျိုး အဖြစ်ခံနိင်ပါ့မလား စဉ်းစားကြည့်တာပါ
ဒီအကြောင်းရဲ့ မူရင်းက သက်ဆိုင်သူတို့၏ ရိုးအ မှု့လို့သာ ဆိုခြင်ပါကြောင်း
” ကျုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးများမှာက အိမ်ထောင်အပျက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာက ရှိနေတယ် ”
အဘ အသိ ဝင်ငွေ ကောင်းသူ တစ်ယောက် ဆိုရင် ၊
တစ်အိမ်ထဲမှာတင် အမေ ရော ၊ သမီး ရော ( သားအမိ အရင်း )၊
နှစ်ယောက်လုံး နှင့် ပေါင်းနေတာတောင် ရှိသေး ။
သူ့ မေးကြည်တော့လည်း ၊ လွယ်လွယ်လေး တဲ့ ။
အပြာ စာအုပ် ၊ အခွေ တွေကို ၊
မယားပါ သမီး အပျိုပေါက်လေး ၊
တွေ့နိုင် လက်လွယ်နိုင်တဲ့ နေရာမှာ ထားပြီး ၊
လက်ရာပျက် မပျက်စောင့်ကြည့်ပြီး ၊
ပစ္စည်းလေး ဘာလေး ဖေါဖေါသီသီ ဝယ်ပေး ၊
တည်းခိုခန်း ခေါ်ပြီး အိပ်လိုက်တာဘဲတဲ့ ။
မယားကြီး ( အမေ ) ကတော့ နောက်ဆုံး ပြောရှာတယ်တဲ့ ၊
ဖိတ်ချင်းဖိတ် ကိုယ့်အိတ်ထဲ ဖိတ်တာပေါ့တဲ့ ၊
အခုခေတ်ကြီးမှာ ဒီလို ဝင်ငွေကောင်းပြီး
မှန်မှန်ကန်ကန် ရှာဖွေကျွေးမယ့်သူ အရှားသား တဲ့ ။
အပြင်မှာ မယားငယ် ထားတာထက်စာရင် တော်သေး ဆိုပဲ ။
အခုတစ်ခါတွေ့တော့ ၊ အခြေအနေ ကို မေးကြည့်တော့ ၊
ကျေးဇူးရှင်က မယားပါ သမီး အကြီး နှင့် ညားပြီးလို့ ၊
အခု မယားပါ သမီး အငယ် ( တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူလေး ) ကိုပါ
ဆက်ကြံနေ ဆိုပဲ ။
ဒီတစ်ခါတော့ အမေ ကရော ၊ သမီးအကြီး ကပါ ၊
မျက်ချေမပြတ် စောင့်ကြည့်နေကြတော့ မလွယ်လှဘူး ဆိုပဲ ။
အဲဒီလူကို ကိုဖိုးစွံဆိုပြီးအားကျမယ့် မြန်မာယောက်ျားတွေ(သာမန်စိတ်ဓါတ်နဲ့အောက်ရှိတဲ့ယောက်ျားတွေ) ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေမလဲ။ အမှန်မှာက ရွံစရာကောင်းလွန်းတဲ့မိသားစုပါ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ပုလင်းတူဗူးဆို့တွေပဲ ကြိုဆိုမှာ။ ကိုယ့်အမေရဲ့ယောက်ျားကိုတောင် ဖြတ်ခုတ်ချင်တဲ့အဲဒီသမီးလိုမိန်းမမျိုး၊ ငွေပဲမျက်စိထဲမြင်ပြီးသမီးကိုတောင် အကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အမေမျိုး၊ ရှုပ်ချင်ရင်တစ်ခြားမှာရှုပ်လို့ရရဲ့သားနဲ့ ဦးဏှောက်ထဲဟိုအေ-ျာင်းပဲရှိတဲ့ေ-ာက်ရှက်မရှိတဲ့တဏှာရူးလိုကောင်မျိုး…သတိထားရမယ့်လူမျိုးတွေ!
တညင်သား နဲ့ အတွေးတူပါတယ်။
အဲဒီလို လူမျိုး မို့ အဲဒီလိုမျိုး မိန်းမ တွေ ကို ရတယ်။
အဲဒီလိုမျိုး မဟုတ်တဲ့ မိန်းမ တွေက လဲ အဲဒီလို လူမျိုး ကို ယူမှာမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။
ဒီတော့ သူ့အရပ် နဲ့ သူ့ဇာတ်လို့သာ မှတ်လိုက်ပါတယ် ဝေဝေရေ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ ကောင်းပါတယ်။
မသေမချင်း ကျွေးထားရမယ့် ..မိန်းမကို
၂ယောက်ကြီးများတောင်ယူပြီး ကလေးတောင် တပြွတ်ကြီးမွေးထားသေး……
ဂီဂီ ရဲ့ ဂီဂီ ပြောပုံ အရဆိုရင် ၊
ကိုယ်က ၊ မသေမချင်း ကျွေးထားရမယ့် မိန်းမတွေ မဟုတ်ပဲ ။
မိန်းမတွေ က ၊ ကိုယ့်ကို မသေမချင်း ကျွေးထားမယ် ဆိုရင်တော့ ။
၂ ယောက်ကြီးများတောင် ယူလို့ သင့်တော်မယ် ပေါ့လေ ။
ဟီဟိ ၊ ဂီဂီ ပြောလို့ အဘ ဥာဏ်စဉ် ပွင့်လင်းသွားပြီ ။
အဘ ကို မသေမချင်း ကျွေးထားမယ့်
နောက် မိန်းမ တစ်ယောက် ရှာခွင့် ထပ်ရှိသေးတာပဲ ။ ( I am entitle )
အချိန် ရှိသေးတုန်း ကြိုးစားလိုက်ဦးမှ ။ ဟီဟိ ။
ကျေးဇူး ဂီဂီ ။ For your brillient advice & idea !!!
ဦးကိုကိုကြီး…… သတင်းစာတွေခေတ်ကောင်းတုန်းက သတင်းထောက်အလုပ်လုပ်တယ်
ဒီဘက်ခေတ်ရောက်တော့ ထိုင်စားနေတာ ဘာမှမလုပ်ဘူး
အတူနေလို့ရန်ဖြစ်ယင် ဦးကိုကိုကြီးက လေးယောက်စလုံးကိုရိုက်တယ်
တခါတလေ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေက ရုပ်ရှင်တွေ ဇာတ်လမ်းပမာတွေထက်တောင် ခန့်မှန်းရခက်ပြီး ထူးဆန်းလွန်းနေတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ လူမတန် ကံချ ဆိုသလို ကံ ကံ၏ အကျိုး လို့သာ
ဘယ်လိုနေလဲမသိ ခိခိခိ( ကိုဂီ အသံဖြင့်ရီရန်)
ရွာထဲက အပျိုကြီးတွေများ မလွယ်ပါလား စိတ်စုတတ်တဲ့သူတွေကြည့်ဘဲ
အိမ်နားမှာတော့ ညီမနှစ်ယောက်လုံးယူပြီး တစ်အိမ်ထဲထားတာတော့တွေ့ဘူးတယ်….
မယားနှစ်ယောက် နဲ့ တအားမလောက်ဖြစ်တာပေါ့..
ဒီလိုလူမျိုးကို အခေါ်အပြောမလုပ်သင့်ဘူး ဆန့်ကျင်ရမယ်
ကိုယ်ကျင့်တရား အကျင့်အမူကောင်းဖို့စမ်းသတ်တဲ့ စာမေးပွဲမှာ ဒီလူကျသွားပြီ။
ရွာတရွာမှာ မိန်းမနှစ်ယောက် တပြိုင်နက်ထဲ ယူထားတဲ့လူတယောက်အကြောင်း ရေးတာဖတ်ဖူးတယ်…။ ဒီလူကငရှုပ်… ရည်းစားနှစ်ယောက်အပြိုင်ထားပြီး တညထဲ နှစ်ခါခွဲ ခိုးပြေးတယ်။ ညကြတော့ ညဉ့်ဦးပိုင်းတယောက်နဲ့အိပ်ပြီး နောက်တယောက်ဆီ ညဉ့်နက်ပိုင်းသွားတာပေ့ါနော်. ရကာစ ခိုးဝှက်နေရတော့ သူအပြင်ထွက် ပျောက်ပျောက်သွားရင် ဘယ်သွားလည်း မသိဘူးနေမှာပေါ့… နောင်မှသိတော့ မတတ်နိုင်တော့ဘူးလေ… အကြံပိုင်သောငခွေးပေါ့ဗျာ…။
အမလေး ဟယ် သူတို.များ ရှာနိုင်လိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံ ဒီမှာ ဖြင့် ယူမလို. ကြံတာ အကြိမ်ကြိမ်ရှိပြီ … ခုထိကို မအောင်မြင်သေးဘူး..
သူ.ဖြင့် သုံးလေးယောက်နဲ.စွန်ထာ.. ဒီမှာ တစ်ယောက်ကို မနဲရှာထားရတာ…
တော်ပြီ အပင်ပန်းမခံနိုင်ဘူး… (ငွေရှာရတာပြောပါတယ်… ) တစ်ယောက်ပဲကောင်းတယ်… ဟိဟိဟိ..
မည်သူမပြု မိမိမှု ။
ပို အံသြတာက မိန်းကလေးတွေကိုပါ ။ ပိုက်ဆံ မရှိလို့ ချမ်းသာသူများကို စပွန်ဆာ ရှာတာ မအံသြပေမဲ့ မိန်းမရှိမှန်း သိရဲ့နဲ့ သူလို ကိုယ်လိုဝန်ထမ်းတွေမှာ ရှုပ်နေကြတာတွေကို ပို အံသြပါတယ်။
အများအားဖြင့် မိန်းကလေးတွေက တရားဝင် လက်မထပ်ရသေးသူ (အပျိုလို့ မရေးချင်လို့) ဖြစ်ပြီး ယောကျာင်္းလေး က အိမ်ထောင် လက်ရှိ ရှိမှန်းသိပေမဲ့ လက်ခံ ကြတာ ။ ယောကျာင်္းတွေ ရှားလာလို့လားလို့တွေးစရာပါ။
သမီးမိန်းကလေးမွေးထားရင် လူကြီးမိဘတွေက အနေအထိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးမျိုးသတိပေးပြောဆိုဆုံးမခဲ့တာတွေက အခုလိုအဖြစ်အပျက်မျိုး မဖြစ်အောင်လို့နေမှာပေါ့နော် …
ငယ်ငယ်တုန်းက လူကြီးတွေစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့အခါတိုင်း ပူတတ်ရန်ကောလို့ တွေးခဲ့မိတယ် …
အခုခေတ်မှာ သမီးမိန်းကလေးတွေကို တစ်မျိုးပြောင်းပြီး ဆုံးမရမယ်ထင်တယ် … အဓိကက ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိအောင် ငယ်ငယ်ကလေးက လေ့ကျင့်ပေးထားရမယ် … ယောက်ျားအပေါ်ကိုမှီခိုပြီးမှ ဘ၀ရပ်တည်နိုင်တဲ့သူမျိုး မဖြစ်အောင် ကြိုးစားထာမယ်ဆိုရင်တော့ နဲနဲတော့လျော့နဲသွားမယ်ထင်တယ် …
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်နဲ့ မယားပြိုင်ထားခွင့်မရှိတဲ့ ဥပဒေပြဌာန်းထားရင် ကောင်းမလားမသိဘူး …
အော်… လောက ဇာတ်ခုံ အဖုံဖုံ…
သောက်လေ သောက်လေ ငတ်မပြေ တဲ့…
အာရကေလည်း တော်တ်ာလန်းမယ် ထင်ပ..။
မုန်းလိုက်တာ … ရွံ့ လိုက်တာ …. ထွီ :mad:
ဘယ်လို ယောကျာ်းနဲ့ ဘယ်လို မိန်းမတွေမှန်းလည်း မသိဘူး …. ။ သူ့အိုးနဲ့ သူ့ဆန်တန်တာတွေ့တာဖြစ်မယ် ။
မိန်းမတွေကလည်း … တူရီးတော်တာတောင် .. ဒီလောက် ယောကျာ်းရှားပြီး သဘောထားကြီးသလား … ။
ဟိုယောကျာ်းကလည်း အပြင်မှာ မှိုလိုပေါက်အောင်ထားဦးတော့ … ဒီလို မိသားစုထဲကလူကို … ပတ်ကြံရသလားနော် … လူ့တိရိစ္ဆာန် စိတ်ဓါတ်မျိုးပါပဲ … ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ဒေါကီးတယ် …. ။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ထဲကို ယူထားတဲ့ညီအမ တွေ့ဖူးတယ်..
သူတို့က အေးဆေးဘဲ ကိုယ်ကသာ အထူးဆန်းဖြစ်လို့…
ဂီဂီ ရဲ့လေသံငှားပြောလိုက်အုံးမယ်… ချဉ်ထှာအေ…
Hninnnn………. likeaKorea movies.
Nowaday, there is too develop Korea’s movies culture in our community. Just worry for new generations.
အဲဒီ ခလေး လေးယောက်က
အဲဒီကိစ္စ ကို ကျွန်တော် အဘွားက ပြောဘူးတယ် အဲဒါ ဆုတောင်းမှားကြတာတဲ့လေ… နောက်ဘ၀ အဆက်ဆက်ပေါင်းရပါစေဆိုပြီး ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ သူတွေက ဆုတောင်းပြည့်ပြီး သကာလ အဲလို သူများ ယောင်္ကျားငယ် ၊မိန်းမငယ်လေးတွေဖြစ် ဟိုလိုဖြစ် ဒီလိုဖြစ် ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပဲ.. အဘွားပြောတာနော်..
အဲဒါကြောင့် ဆုတောင်းရင် သတိလေးသာထား… ချစ်သူနဲ. ကြည့်နူးသီတကူးပြီး ဘ၀ဆက်တိုင်းပေါင်းရပါစေသားဆိုလို.ကတော့
ကျွန်တော်ကတော့ ဆုတောင်းတော့ဘူး… ဟိဟိ
အမ်းးးးးးးးးးးး (ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလိုမကျအော်သံဖြင့်ဖတ်ပါရန်)
လူဆိုးကြီး စောစောကတည်းက မပြောဘူး
တွဲခဲ့သမျှ ဘုရားမှာ သစ္စာဆို ဆုတောင်းဆိုလို့
သံသရာမှာ ကျင်လည်သမျှ ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းခဲ့တာ
မိန်းမ တစ်ယောက်ဟာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အိမ်ထောင် တစ်ဆက်ကနေ နှစ်ဆက် ၃ ဆက်ပြုရင် အဲဒီ မိန်းမ ကို မကောင်းတဲ့ မိန်းမ လိုမျိုးပတ်ဝန်း ကျင်က မြင်တတ်ကြတယ်…။ အခု လို ယောက်ျားတစ်ယောက် အိမ်ထောင်လည်း မကွဲပဲနဲ မိန်းမ များစွာနဲ ရှုပ်ချင်တိုင်းရှုပ် ၊ မယားပြိုင်ထား တာတောင် မကောင်းတဲ့ ယောက်ျားအဖြစ် မမြင်တတ်ကြဘူး…။ ယောကျားကောင်း မောင်းမထောင် ဆိုတဲ့စကားနဲ ဂုဏ်တောင်ယူချင်နေကြသေးတယ်…။ တကယ်တော့ ယောကျာ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မိန်းမ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာ က တော ရှက်စရာကောင်းပါတယ်…။ အားလုံးပဲ တစ်ယောက်နဲ တစ်ယောက်ချစ်ခင် ကြင်နာ နားလည်မှုပေးပြီး.. တစ်လင်တစ်မယား စနစ် ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ… ။
အဲဒီလိုလူမျိုးက အသက်ကြီးရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ သားသမီးကလည်းမလေးစား၊ မယားတွေကလည်းအရင်ကမကျေနပ်သမျှ အိုမင်းမစွမ်းတော့ ဖြစ်သလိုပစ်ထားရော။ မနှိပ်စက်ရင်ကံကောင်း… တွေ့ဘူးတယ်
မဝေ ရေးလိုက်မှပဲ.. လူ့လောက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ ဇတ်လမ်းတွေ ထွက်လာလိုက်ကြတာ.. ကိုယ်မသိတဲ့ အကြောင်းတွေ တော်တော် များတာပဲ.. လောကကြီးမှာ အဲလောက် ဆိုးတဲ့ လူတွေ မတွေ့ဘူးသေးဘူး။
အေမီ တို့တော့ မစွင်္သေးဘူး
ဟမ် … သူကလဲ တမျိုး … မလွယ်ပါလား …
ဘ၀တဏှာ ရှိနေသရွေ့တော့ မှားလို့မှားမှန်းမသိကြပါဘူးလေame နဲ့ etone တို့လဲသတိ ထားကြနော်
အမ် kokothandar ဘလိုင်းကြီးပါလား ဟ ။ :mad:
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်ဆိုလျှင်တောင် … တခြားမိန်းမတွေ လုပါစေဆိုပြီး လွှတ်ပေးလိုက်ဦးမယ် … ။ မိန်းမတွေ … ရင်ထုပြီး .. လင်လုရမယ့် ခေတ်တော့ ဖြစ်လာမယ်မထင်ဘူး …
အိမ်ထောင်ဖက်မပြောနဲ့ … ကိုယ်ချစ်သူရည်စားတောင် … မရှင်းမရှင်းအသံထွက်မလာနဲ့ …. လုံးဝ .. လုံး ၀ .. လက်မခံဘူး ..ပြောင်းဆန်သွားမယ် ……. မှတ်
မအိတုံ ကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်….
ဓာတ်စာ မှတ်နေလားဂွာ …
သူ့အစား ရှက်မိပါ့ရဲ့ဗျာ ……….
အမ် . . . .
ဘဲစာ ဘယ်လိုကျွေးမှာ လဲ . ?
သူတို့ ဘဝနဲ့ သူတို့ ရှိပါစေတော့ .. ..
သူတို့ရဲ့ ကံ ၊ ဒီလိုပဲ ယူဆမိတယ် .. ..
ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် မဖြစ်ဖို့ တားဆီးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံး .. ..
မြို့မှာကအဲလိုမရှိ သူလိုကိုယ်လို လူရာဝင်နေတာဆိုတော့
ယူတော့မယား ၃ ယောက်
ဒီလိုဖြစ်ရပ်ပေါင်းများစွာ ရှိနေပါတယ်…….. မောင်နှမ အရင်းချင်းယူတာမျိုးတွေထိ ဆိုးဆိုးရွားရွား ကြား ဘူးပါတယ်………. ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကို အရမ်းမုန်းတီးမိပါတယ်……….. အပြင်မှာ ရှုပ်တယ်ဆိုတာတော့ တဏှာမီး မငြိမ်းနိုင်သေးလို့ဆိုပီး နားလည်ပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်……… အခုလို အတွင်းထဲမှာပဲ ပတ်ရမ်းတယ် ဆိုတော့ အိမ်း လူ့တိရိစ္ဆာန်တွေများလားရယ်လို့တောင်…………….. ကြောက်လဲကြောက်ကြဘူးနော်………………… မလုပ်ကောင်းတာဒွေ…………
ဝေးကွင်းဝေးကွင်း ရိုးသွားရင် အိမ်ကွင်းလေး ကွင်းလေးပြောင်း
ကောင်းလားကို ကောင်းဒယ် …………..အေးရာအေ
သူတို့တွေလည်းတော်တော်နေပျော်သားနော်။ သူတို့အစား လဲတောင်သေပစ်ချင်တယ်။
အဘဖောပြောတဲ့ ” ကျုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးများမှာက အိမ်ထောင်အပျက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာက ရှိနေတယ် ”
ဆိုတာတော့…. ဖောင်း2 သာဆိုရင် ဒီလိုလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မျက်နှာပျက်စရာအဖြစ်မျိုးကိုတော့ လုံးဝကို
ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကိုအထင်သေးလွန်းလို့ ပေါင်းဖို့နေနေသာသာ ရွံ့လွန်းလို့……. ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်
အချင်းနဲ့ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ပဲကိုယ်ရပ်ပစ်လိုက်မယ်။ ဒါကမှ ပိုပြီးဂုဏ်ရှိအုန်းမယ်လေ။
ဘောလုံးစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ ဒါက အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူး အိမ်ကွင်းနဲ့လေးကျင့်ရေးကွင်းဖြစ်နေပြီ